Isiphawuli esingacimekiyo, i-Ink engacimekiyo, iprinta yokufaka iikhowudi-AoBoZi
Inkampani yethu yinkampani ye-high-tech egxile kwi-R & D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo yezinto ezisetyenziswayo zokuprinta.
Njengomvelisi oqinisekisiweyo we-ISO9001 kunye ne-ISO14001, uzinzo lwethu lwe-inki yeyona nto ilungileyo e-China, eyamkelwa ngabathengi kunye nabakhuphisana nabo e-China.
Ukuze kuqinisekiswe umgangatho kunye nenkonzo, siye egxile kwinkqubo yemveliso. Sifumene indumiso ephezulu liqabane.
Sinemveliso yethu kwaye sinemizi-mveliso ethembekileyo nesebenzisanayo kakuhle ebaleni. Ukubambelela "kumgangatho wokuqala, umthengi kuqala.
2580 2586K 2588 2589 2590 HP kuphela Solar Ink Cartri ...
5-25% Silver Nitrate Blue / Mfusa Umbala Silver N ...
30ml iibhotile zeglasi Smooth Ukubhala Fountain Pen ...
Ikhowudi ye-Qr ekhawulezayo eyomileyo engasasebenziyo Imithombo yeendaba 45si 2588 27 ...
Iiprinta eziPhathekayo eziPhathwayo / ezi-Oline zokufaka iikhowudi ...
I-TIJ2.5 yeeNkqubo zeNki ze-Bulk i-CISS Tank ene-1/2/4/6 ...
Iindidi ezintandathu eziphambili
Ngaphezulu kweminyaka eli-15 yamava
I-Fujian AoBoZi Technology Co, Ltd. yasekwa ngo-2005 eFujian, China, inkampani yethu yinkampani ephezulu yezobuchwephesha egxila kwi-R & D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo yezinto ezisetyenziswayo zokuprinta. Singoyena mvelisi ubalaseleyo kunye nenkokeli yeengcali kwicandelo le-Epson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Mzalwana, kunye nolunye uphawu oludumileyo olukhethekileyo.
1. Njengomvelisi oqinisekisiweyo we-ISO9001 kunye ne-ISO14001, uzinzo lwethu lwe-inki lolona luhamba phambili eTshayina, olwamkelwe ngabathengi nakwabo bakhuphisana nabo e-China.
2. Ubungakanani bokuthengisa bubekiwe.
3. URhulumente weePhilippines usinyula njengomnye wabathengisi beinki.
4. Sinokwamkela ishishini leinki ye-OEM.
5. Singumthengisi weinki onokuthenjwa kubavelisi beekhatyuli zeTaiwan.
2. Gcwalisa kwakhona i-inki ne-kit yenki
3. IiCISS kunye nezixhobo zeCISS
4. Iikhatriji ezihambelanayo
5. Iseti epheleleyo yeeprinta ezishisayo kunye nezixhobo zazo
6.I-inki ekhethekileyo, enjenge-inki engacimekiyo
Zonke iimveliso esizithengisayo ziqinisekisiwe
Umthamo wentengiso ubekwe
Nceda unxibelelane nathi ngoku
Inkonzo ejolise kuMthengi
I-Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2007. Inkampani yethu yinkampani ye-high-tech egxila kwi-R & D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo yezinto ezisetyenziswayo zokuprinta.
Iqela lethu lizimisele ekwenzeni izinto ezintsha, kunye nokukhanyiselwa kunye nokudityaniswa kunye nokusebenza rhoqo kunye nobulumko obalaseleyo kunye nefilosofi, sibonelela kwimfuno yentengiso yeemveliso eziphezulu, ukwenza iimveliso zobungcali.
Iminyaka emininzi, sinamathele kumgaqo wokujolisa kubathengi, umgangatho osekwe kuwo, ukugqwesa ukulandela, ukwabelana ngokwabelana ngenzuzo.